Diyaarado Dagaal oo Duqeeyay Baabuur ay la socdeen Horjoogayaasha Kooxda Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Diyaarado Dagaal oo Duqeeyay Baabuur ay la socdeen Horjoogayaasha Kooxda Shabaab
Kismaayo (Keydmedia) - Diyaarado nooca Dagaalka ah ayaa shalay galinkii dambe duqeeyay fariisimo iyo kolonyto baabuur ah oo ay la socdeen horjoogayaal ka tirsan Kooxda Shabaab kuwaasoo ku socdaalaayay qeybo ka tirsan gobbolka Jubbada Hoose.
Diyaaradahan ayaa sigaar ah u beegsaday Kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen horjoogayaal ka tirsan kooxda Shabaab kuwaasoo maraayay Deegaanka Cag-libaax ee gobbolka Jubbada Hoose halkaasoo ay Diyaaradaha ku dileen ilaa 12 qof oo isgu jira Maleeshiyaad iyo horjoogayaashooda.
Maxamed Faarax Daahir Afhayeenka Ciidamada Dowladda KMG ah ayaa Keydmedia khadka taleefoonka ugu sheegay in Diyaaradaha ay beegsadeen labo gaari oo nooca raaxada ah iyo gaari nooca Ciidamada ah halkaasoo ay dhamaantoodba ku bur bureen.
Mr Maxamed Farah ayaa sidoo kale xusay in tirada dhimashada ay ka badan karto 12 qof maadaama baabuurta ay la socdeen kudhowaad 20 qof.
Awooda Kooxda Shabaab ee dagaalada gobbolada Jubbooyinka ayaa mudooyinkaanba hoos u dhacday wixii ka dambeeyay markii Kooxda lagala wareegay magaalada Afmadow oo muhiim u ahayd difaacooda.